IYunivesithi yaseYale, i-SAT, kunye ne-ACT izikolo zokufumana
Izibalo zeeYunivesithi zeYale University
Funda ngeYale University kunye ne-GPA kunye ne-SAT / ACT ACT
Ngomlinganiselo wokwamkelwa kweepesenti eziyi-6 kuphela, iYunivesithi yaseYale ingenye yeekholeji ezikhethiweyo kwilizwe. Ukuze ungene kwisikolo se-Ivy League njenge-Yale, uya kufuna ama-stellar amabakala kunye namanqaku aphezulu e-SAT / ACT kunye nemisebenzi yentshukumo ye-extracurricular, ukunqoba iincwadana zesicelo kunye nokuphumelela kwizifundo ezikhawulezayo ezifana nokuPhakamisa, i-IB okanye i-Double Bhaliso. Nangona ungumfundi ocacileyo "A" ongumfundi ophezulu kakhulu we-SAT okanye izikolo ze-ACT, kufuneka uthathe iYunivesithi yaseYale ibe isikolo sokufikelela . Abafundi abaninzi abaqeqeshekileyo abanako ukuvunyelwa.
Kutheni Unokukhetha IYunivesithi Yale
Eyilwe ngo-1701, iYale (kunye nePrinceton neHarvard ) ngokuqhelekileyo iyaziphakamisa kwizinga eliphezulu kwiiyunivesithi eziphakamileyo. Isikolo se- Ivy League sinesibonelelo esingaphezu kweebhiliyoni ezingama-27 kunye ne-6 ukuya ku-1 umfundi kumlinganiselo wezolawulo, ngoko kulula ukubona isizathu sokuba. Ngenxa yamandla kaYale kwizobugcisa kunye nenzululwazi ye-liberal, iyunivesiti yanikezwa isahluko sePhi Beta Kappa . Ilayibrari yeYale ibamba ngaphezulu kwezigidi eziyi-12.7. Kutholakala eNew Haven, Connecticut, Yale yindlela elula yokuhamba ukuya kwiNew York City okanye eBoston. Kwiimidlalo, kwiinkalo ezingama-35 zamaqabane. Akumangalisi kukuba, uYale wenza uluhlu lwethu lweeNyuvesi zeSizwe eziPhezulu, iikholeji ze-New England , kunye neeKholeji eziphezulu ze-Connecticut .
IYunivesithi ye-YPA, i-SAT kunye ne-ACT Graph
IYunivesithi yaseYale, i-SAT izikolo kunye noMTHETHO Ukwazisa ukungena. Jonga i-graph time-time kwaye ubale amathuba akho okungena kwiCappex. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ingxoxo yeeYunivesithi zeeYunivesithi zokuVunywa kweYunivesithi
Kwigrafu apha ngasentla, amachaphaza ahlaza okwesibhakabhaka kunye aluhlaza abonisa abafundi abanenhlanhla ngokwaneleyo yokungena, kwaye ubona ukuba abaninzi abafundi abaye bavunyelwa kwiYale babenomlinganiselo we-SAT (i-RW + M) ngaphezulu kwe-1300, kunye nemilinganiselo ye-ACT engaphezulu 28. Amanqaku aphezulu okuvavanya aya kuphucula amathuba akho ngokulinganayo, kwaye okunye okuqhelekileyo kuyimilinganiselo ye-SAT engaphezulu kwe-1400 kunye nomdlalo we-ACT oyingxenye engama-32 okanye engcono. Phantse bonke abafake izicelo abaphumeleleyo babebhalwe kwizikolo eziphakamileyo ezizaliswe ngama-"A", kwaye ii-GPA zivame ukufumaneka kwi-3.7 ukuya kwi-4.0. Kwakhona, qaphela ukuba ukufihla phantsi kwebala elihlaza okwesibhakabhaka kunye nokuluhlaza kwinqona eliphezulu lasegrafu kuninzi obomvu. Xa amabakala akho kunye neziphumo zokuvavanya zijoliswe kwi-Yale, usasafuna ezinye iimandla ukuze ugxininise ikomiti yokwamkelwa. Abafundi banokuthi banqatshelwe i-4.0 GPAs kunye nama-SAT apheleleyo.
Yintoni ongayenza ukuphucula amathuba akho wokungena kwiYale? IYunivesithi inomgaqo-nkqubo wokungeniswa okupheleleyo , ngoko-ke amanyathelo angenani-manani njengeencwadana zinconywa , imisebenzi yangaphandle , kunye neengqinisiso zesebe zidlala indima ebalulekileyo (jonga amathiphu ekusebenziseni incoko yesicelo sakho esiqhelekileyo ). Ngeenkcukacha ezongezelelweyo, ubunzulu kunye nobunkokheli kwinto enye iya kuba yinto emangalisayo ngaphezu kokubhikisha kokubandakanyeka ngokungathandabuzekiyo. Umzekelo, umfundi odlala idrama kwiminyaka emine esikolweni esiphakeme kwaye uthatha indima ephambili kumdlalo uya kuba mnandi kunomfundi owayesesikhundleni seminyaka emnye, iqela leSpanish ngonyaka ozayo, kunye nonyaka unyaka omnye.
Kwakhona, kwiYunivesithi yaseYale inesicwangciso esisodwa sokhetho lokuqala . Ukuba uyazi ukuba i-Yale iyisistim sakho sokuqala, kufuneka usebenzise ekuqaleni . Izinga lokumkela lihlala lihle ngaphezu kokuphindwe kabini ukuya phezulu kubafakizicelo bexesha eliphambili njengoko kunjalo kwi-pool ye sicelo. Ukusetyenziswa kwangaphambili ngenye indlela ongayibonisa ngayo inzala yakho eyunivesithi.
Ekugqibeleni, isimo selifa singaphinde siphucule amathuba akho yokungena kwiziko le-Ivy League. Le nto iikholeji ayenzi ukuvakalisa kakhulu, kwaye akuyona into enokulawula ngayo, kodwa izikolo ezininzi ziya kunika ithuba elikhethekileyo kubafaki-zicelo abanomzali okanye umntakwabo oya kuzo. Oku kwakha ukunyaniseka kwentsapho kwiziko, into exabisekileyo ngaphambili.
Ipesenti yabafakizicelo bayamkelwa: ama-6 ekhulwini
Iziphumo zokuvavanya: i-25 / 75th Percentile
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 710/800
ISAT Math: 710/800
UMTHETHO WOMTHETHO: 32/35
UMSEBENZI IsiNgesi: 33/35
UMTHETHO UMathe: 30/35
Ngakumbi Ulwazi lweYunivesithi Yale
Phantse isiqingatha sabo bonke abafundi baseYale bafumana inkxaso yunivesithi, kwaye iiphakheji zoncedo lwezemali ziba nesisa kubafundi abafanelekayo. Iyunivesithi inokuziqhayisa ngokugcinwa kwezinga eliphezulu kunye nokuphumelela kwamanani.
Ubhaliso lwabonke: 12,458
Ukuphulwa kwesini: ama-51 ekhulwini ngamadoda / ama-49 ekhulwini amabhinqa
Ipesenti ezili-100 zexesha elipheleleyo
Imfundo kunye neMali: $ 49,480
Iincwadi: $ 3,580 ( kutheni uninzi? )
Igumbi neBhodi: $ 15,170
Ezinye iindleko: $ 720
Iindleko ezipheleleyo: $ 68,950
Yale Financial Aid (2015-16)
Ipesenti yabafundi abatsha abafumana uncedo: iipesenti ezingama-58
Izibonelelo: ama-50 ekhulwini
Imali: iipesenti ezili-10
Izibonelelo: $ 48,126
Imali: $ 5,365
I-Popular Majors Biology, i-Economics, isiNgesi, iMbali, i-History, i-Interdisciplinary Studies, i-Political Science, Psychology
Iziqinisekiso zokuBanga nokuBala
Ukugcinwa kwabafundi bonyaka wokuqala (abafundi bexesha elipheleleyo): ipesenti ezingama-98
Ireyithi yokuQinyezelwa koNyaka-4: ama-87 ekhulwini
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka eyi-6: iipesenti ezingama-96
Iiprocollegiate Athletic Programs
Imidlalo yabantu: Ibhola, iLacrosse, Ukukhawula, Ukubhukuda, iThenati, ukuCanda, iGalofu, iHockey iHockey, iCoccer, iScash
Imidlalo yabasetyhini: Ukukhawulela, iLacrosse, Ukubhukuda, iThenati, iScash, iVolleyball, I-Track and field, I-Softball, iHockey yeHlabathi
NjengeYale University? Emva koko Hlola ezinye iiyunivesithi eziphezulu
Abafake izicelo kwi-Yale bavame ukusebenzisa kwezinye izikolo ze-Ivy League njenge- Harvard University , i- Princeton University kunye ne- Columbia University . Hlalani nikhumbule ukuba zonke ii-Ivies zikhethe kakhulu kwaye zifanele ziqwalaselwe njengezikolo ezifikelela kuzo.
Ezinye iilunivesithi eziphezulu ezifake isibheno kubafakizicelo be-Yale ziquka iYunivesithi yaseDuke , i- Massachusetts Institute of Technology kunye neSyunivesithi yaseStanford .
> Imithombo Yedatha: Igrafu yothando ngeCappex; zonke ezinye iinkcukacha ezivela kwiziko leSizwe leeNkcukacha zezeMfundo
IYunivesithi yaseAlabama eBirmingham GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
ISt. Lawrence University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IGeorge Mason University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yase-Arizona GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Rollins College ye-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
North Carolina I & T GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
UT Austin GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Stevens Institute of Technology i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
FAMU, Florida I-A & M ye-University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Austin College GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Mars kwiGemini - iMpawu zeMars
I-Hadrosaurus, owokuqala ukuchonga iDuck-Billed Dinosaur
Yintoni Engalunganga NgamaBuddha?
Iimpawu zeeNkqubo zoMzimba
I-Code of Justinian
I-Hisarlik (Turkey) - I-Scientific Excavations e-Ancient Troy
I-Cancer ne-Scorpio Uthando olufanelekileyo
Indlela Yokufumana Iqabane LeKholeji Elifanelekileyo
Ukuchonga iMithi kwiCedar Family
Umthandazo Wemihla ngemihla kaMama Teresa
Yintoni iPhepha Lophando?
I-US Navy: Iklasi yaseMzantsi Dakota (BB-49 ukuya kwi-BB-54)
Funda indlela yokunyuka iNtaba iKahtadin, iNtaba ephakamileyo yeMaine
Ngomnxeba - Sebenzisa isiNgesi kunye neengxoxo
I-Jefferson's Letter ku-Danbury Baptisti
Uluphi umcebisi weNdlovukazi (QC)?
UMTHETHO Ufumana ubungeniso kwiNkomfa ye-Atlantic Coast
Nceda Abantwana babala iNgingqi kunye noLuhlu lweBindi
Iindawo zezulu ze-Aristotle
Indlela yokukhetha iHarry Racing Horse
Namkaran - Indlela Yokubiza Umntwana Wakho
Ukugquma Umculo: I-Jazz Era yamaBandi amakhulu kunye neMadhahall
Unokufumana njani iitoni ze-Free Snowboard Stickers